- ट्राफिक प्रहरीलाई कालो चस्मा (भिडियोसहित)
ट्राफिक प्रहरीलाई कालो चस्मा (भिडियोसहित)
काठमाडौंः नेपाल प्रहरीले उपत्यकामा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीलाई कालो चस्मा वितरण गरेको छ ।
धुलो, धुवाँबाट बच्नका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीलाई कालो चस्मा वितरण गरिएको हो ।
ट्राफिक प्रहरीलाई नमूना सङ्गठनको रूपमा विकास गर्ने नीतिअनुसार उपत्यकामा कार्यरत सबै ट्राफिक प्रहरीलाई कालो चस्मा वितरण गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बताएका थिए ।
यसै विषयलाई लिएर महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तलाई ट्राफिक प्रहरीलाई कालो चस्मा किन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने उपत्यकाको धुलो धुवाँबाट बच्न तथा सडकमा ‘स्मार्ट’ देखिने भएकाले उक्त चस्मा वितरण गरिएको बताए।
उनले भने, ‘हामीले १५ सय चस्मा खरिद गरेका हौं । सबै ट्राफिक प्रहरीलाई एक–एक वटा चस्मा दिइसकेका छौं । यसले सडक सुशासन कायम हुने, ट्राफिक प्रहरीमा उच्च मनोवल हुने विश्वास गरेका छौं ।’
१५ सय चस्मा मध्ये १४ सय २० चस्मा वितरण गरिएको भन्दै एउटा चस्मालाई १६ देखि १७ सय रुपैयाँसम्म लागत परेको बताए । चस्माले अल्ट्रा भ्वाइलेन्ट रे प्रोटेक्सन गर्ने र आँखालाई सुर्यको किरणबाट बचाउन निकै फलदायी देखिने उनको भनाई थियो ।
साथै उनले अनिवार्य रुपमा लगाउने हो ? भनि प्रश्न गर्दा भने, ‘यो आफुलाई अनुकुल समयमा लगाउन दिइएको हो । बिहान र साँझको समय पानी परेको समयमा लगाउन पर्छ भन्ने छैन । अर्को कुरा अन्य किसिमका चस्मा प्रयोग गरेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई पनि अनिवार्य छैन । यसको काम भनेको आँखा सुरक्षित बनाउनु हो । अनुकुलतमा लगाउन सकिन्छ ।’
प्रकाशित मितिः भाद्र ९ सोमबार, २०:२०